ADIM-PANAHY — Tsara Soratra
Mamorona sary ao an'efitra voatokan'ny eritreri-mpanonofy ny fisiokan'ny rivotr'ilay mamatonalina mirakotra fanginana. Mihiratra anivon'ny haizina matevina ny masoko, dia henon'ny Fanahiko ny feon'Anjely mihira ny hiran'ny lanitra...
Reko mihamafy ilay rivotra tsy tony amin'ny ora fialan-tsasatry ny velona. Tomany valala ny alika mpanao valalan'amboa... fa lala-migodànan-drafahafahana ny alina mpitondra fisainana.
Asa! Angamba, hoy aho nikipy, alina natao itovian'ny manam-panahy?
Efa misamonta ny onja vaventin'ilay ranomasimbe, saingy tsy mbola mety ho feno ny kapoaka! Maneho ny heriny ny fivatravatran'ny tsela-mitsoriaka ka toa mitsiky tsy ravo ny lanitra efa ngaly...
Moana ny tany be hetraketraka, mahatsiaro ho piti-tsinga monja eo afovoan'ny tontolo vita Nanahary, toa miandry sy efa vonona hitelina azy.
- Nofy ve ny sary miaina ato an'efitr'eritreritro? Hoy aho, tsy te hino fa hahita valiny...
Nangina moramora ny ao ivelany ao. Ampaha-tsegondra vitsy monja ilay ady lehibe teo. Mbola mihodina ihany ny tany ary ny lanitra tsy nahifika ireo andian-drahona mpanakona ilay tomara-bolana...
Nasampiko ny lambako dia iny aho nitodi-doha hivetso an-drafahazazàna:
- Satriko tsiahivana na dia zaridaina maina tsy voavoly, nanjakàn'ny fandrotràrana mpandimby ray tsy satry...
ROJO na RAZAFIMAHATRATRA José Abel, teraka ny 07 Martsa 1977. Manambady, niteraka roavavy. Tsy nahavita fianarana loatra (nijanona teo amin ny kilasy 1ere.). Mpivarotra lasopy amoron-dalana ety Andoharanofotsy ety. Tia ary mankamamy ny Kolontsaina Malagasy. Miezaka mivoy ny Haisoratra. Mba mahita rirany kely eo amin' ny tontolon'ny sary (hosodoko, tantara an-tsary).